द्वारा पोस्ट गरिएको Tranquillus | नोभेम्बर 19, 2020 | लिखित र मौखिक संचार कौशल
तपाइँले काम गरेको कुनै पनि ओभरटाइमको लागि तपाइँलाई भुक्तान गर्न अनिवार्य छ। तपाइँको payslip ले तपाइँले कति घण्टा काम गर्नुभयो र कुन दरमा तपाइँलाई क्षतिपूर्ति दिइयो भनेर दर्साउनुपर्दछ। यद्यपि, कहिलेकाँही तपाइँको रोजगारदाताले उनीहरूलाई भुक्तान गर्न बिर्सन्छन्। त्यसोभए तपाईं तिनीहरूलाई दावी गर्न योग्य हुनुहुन्छ। यसका लागि नियमित नियमका लागि सम्बन्धित विभागलाई पत्र पठाउन सल्लाह दिइन्छ। यहाँ भुक्तानी अनुरोध गर्न केहि नमूना पत्रहरू छन्।
ओभरटाइममा केहि विवरणहरू
कुनै पनि कर्मचारीले आफ्नो नियोक्ताको पहलमा काम गरेको ओभरटाइमको रूपमा व्यवहार गरिन्छ। वास्तवमा, श्रम कोडका अनुसार एक कर्मचारीले प्रति हप्ता hours 35 घण्टा काम गर्नुपर्दछ। त्यस पछाडि, रोजगारदातामा एक बृद्धि लगाइएको छ।
यद्यपि, एकले ओभरटाइम र ओभरटाइम भ्रमित गर्नु हुँदैन। हामी घण्टा वा पार्टटाइममा काम गर्ने एक कर्मचारीलाई विचार गर्छौं। र जो आफ्नो करार मा उल्लेख गरिएको अवधि भन्दा बाहिर घण्टा काम गर्न आवश्यक छ। मनपर्‍यो थप घण्टा
कुन अवस्थाहरूमा ओभरटाइम मानिदैन?
त्यहाँ त्यस्ता परिस्थितिहरू छन् जब ओभरटाइमलाई ध्यानमा राखिदैन। यस प्रकारको सन्दर्भमा, कर्मचारीले कुनै पनि हालतमा कुनै बृद्धिको भुक्तानीको माग गर्न सक्दैन। यसमा तपाईंले आफैंमा प्रदर्शन गर्ने निर्णय गर्ने घण्टा समावेश छ। तपाईको रोजगारदाताबाट कुनै माग बिना। तपाईको पोष्ट प्रत्येक दिन दुई घण्टा ढिलो छोड्न सक्नुहुन्न। त्यसपछि महिनाको अन्तमा भुक्तानी गर्न सोध्नुहोस्।
त्यसो भए तपाईको कामकाजी समय निश्चित कम्पनी सम्झौताको आधारमा परिभाषित हुन्छ तपाईको कम्पनी भित्र सम्झौता गरीएको। कल्पना गर्नुहोस् कि यस प्याकेज द्वारा प्रदान गरिएको साप्ताहिक उपस्थिति समय hours hours घण्टा हो। यस अवस्थामा, ओभर्रनहरू ध्यानमा राख्दैनन्, किनकि तिनीहरू प्याकेजमा समावेश छन्।
रिड व्यावसायिक ईमेलहरू कसरी लेख्नुहुन्छ
अन्तमा, त्यहाँ त्यस्ता केसहरू पनि छन् जब ओभरटाइम प्रतिपूर्ति समयद्वारा प्रतिस्थापन गरिन्छ, त्यसैले यदि तपाईं यसको लागि योग्य हुनुहुन्छ भने। तपाईं अधिक केहि आशा गर्न सक्नुहुन्न।
अवैतनिक ओभरटाइमको अस्तित्व कसरी प्रमाणित गर्ने?
बिना भुक्तान गरिएको ओभरटाइमको बारेमा गुनासो गर्न चाहने कर्मचारीले आफ्नो अनुरोधलाई समर्थन गर्नका लागि सबै कागजातहरू जम्मा गर्ने सम्भावना हुन्छ। यो गर्नको लागि उसले आफ्नो कार्य घण्टा स्पष्टसँग निर्धारण गर्नुपर्दछ र विवादसँग सम्बन्धित बढी समय घण्टाको संख्या मूल्या assess्कन गर्नुपर्दछ।
एक पटक सबै प्रमाणित भयो। तपाईं सहकर्मीहरूको प्रमाण, भिडियो निगरानीको रूपमा प्रमाणको रूपमा प्रस्तुत गर्न स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तपाईंको ओभरटाइम, ईलेक्ट्रोनिक वा एसएमएस सन्देशहरूको एक्सट्रक्सहरू ग्राहकहरूसँग तपाईंको एक्सचेन्जहरू देखाउँदै कार्यक्रमहरू। इलेक्ट्रॉनिक डायरीहरूको प्रतिलिपिहरू, समय घडीहरूको रेकर्ड। यी सबै स्पष्टसँग ओभरटाइमसँग सम्बन्धित खाताहरूको साथ हुनुपर्दछ।
तपाईंको रोजगारदाताका लागि, उसले स्थिति नियमित गर्नु पर्छ यदि तपाईंको अनुरोध मान्य छ। केहि समाजमा तपाईले हरेक महिना झगडा गर्नुपर्दछ। तपाईंको हस्तक्षेप बिना, ओभरटाइमको भुक्तानी व्यवस्थित रूपमा बिर्सिनेछ।
तपाइँको ओभरटाइम को भुक्तान नगरेको गुनासो कसरी अगाडि बढ्ने?
स्टाफ द्वारा काम गरेको ओभरटाइम अक्सर व्यवसायको आवश्यकता र रुचिहरूको लागि गरिन्छ। यसैले, आफ्नो ओभरटाइमको भुक्तानी नगरेकोमा आफैंलाई दु: खी मान्ने कर्मचारीले आफ्नो रोजगारदातासँग मानकीकरणको लागि आवेदन दिन सक्छ।
अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त गर्न धेरै चरणहरू अनुसरण गर्न सकिन्छ। पहिले, यो रोजगारदाताको पक्षमा एक निरीक्षण हुन सक्छ। त्यसोभए तपाईको समस्यालाई रेखांकित गर्दै पत्र लेखी समस्यालाई चाँडै समाधान गर्न सकिन्छ। अर्कोतर्फ, घटनामा जब रोजगारदाताले तिर्नु पर्छ उसले तिर्नु पर्छ। यो अनुरोध प्राथमिकता रसिद को पावती संग दर्ता पत्र द्वारा गरिनु पर्छ।
यदि रोजगारदाता अझै पनी परिस्थिति समाधान गर्न चाहँदैनन् भने, तपाईको मेल पाए पछि। स्टाफ प्रतिनिधिहरूलाई सम्पर्क गर्नुहोस् उनीहरूलाई तपाईंको केसको बारेमा बताउन र सल्लाह लिन। तपाईंको क्षति र तपाईंको प्रेरणाको मात्रामा निर्भर गर्दै। यो तपाईं औद्योगिक ट्रिब्यूनल जानु भने हेर्न को लागी। वा यदि तपाईंले थप काम रोक्नुभयो भने। समान कमाउन अधिक काम गर्नुहोस्, यो वास्तवमै चाखलाग्दो छैन।
ओभरटाइम भुक्तान अनुरोधका लागि पत्र टेम्प्लेटहरू
यहाँ तपाईले प्रयोग गर्न सक्ने दुई मोडेलहरू छन्।
रसिद को पावती संग पंजीकृत पत्र
विषय: ओभरटाइमको भुक्तानीको लागि अनुरोध
एक कर्मचारी सदस्यको रूपमा [भाँडा मिति] पछि [पोष्ट] को पोष्टमा, मैले [ओभरटाइम घण्टा काम गरेको] [तारीख] बाट [मिति]। यो सबै क्रममा कम्पनीको विकासमा योगदान पुर्‍याउन र मासिक उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न। यसैले म week 35 घण्टा भन्दा बढी भयो, कानुनी रूपमा प्रति हप्ता काम गर्ने समय।
वास्तवमा, जब मैले [मेरो त्रुटि भएको ठाउँमा] को महीनाको लागि मेरो payslip प्राप्त गरें र जब मैले यसलाई पढें, मैले याद गरे कि यी ओभरटाइम घण्टा गणना गरिएको छैन।
यही कारण हो कि म तपाईंहरूलाई मेरो समयावधिको विवरणहरू यस समयावधिमा मेरो ओभरटाइम सारांश विवरण पठाउन अनुमति दिन्छ [सबै कागजातहरू संलग्न गर्नुहोस् तपाईंको काम गर्ने घण्टाको औचित्य प्रमाणित गरेर र तपाईं ओभरटाइम काम गर्नुभयो भनेर प्रमाणित गर्नुहोस्]।
म तपाईंलाई सम्झना गराउन चाहन्छु कि श्रम संहिताको लेख L3121-22 को प्रावधान अनुसार सम्पूर्ण ओभरटाइम बढ्नु पर्छ। दुर्भाग्यवश, मेरो तलबको साथ यो मामला थिएन।
त्यसकारण म तपाईंलाई हस्तक्षेप गर्न भन्दछु ताकि मेरो अवस्था जति सक्दो चाँडो सुधार होस्।
तपाईंबाट एक जवाफ पेन्डि,, कृपया स्वीकार गर्नुहोस्, मैडम, मेरो शुभकामना।
[Post] को पोष्टमा [भाँडा मिति] पछि कम्पनीको कार्यशक्तिको अंशको रूपमा, मसँग एउटा रोजगार सम्झौता छ जसले साप्ताहिक काम गर्ने समय उल्लेख गर्दछ जुन hours 35 घण्टा भन्दा बढी हुँदैन। यद्यपि मैले भर्खर मेरो पेसलिप प्राप्त गरें र छक्क परें, मैले काम गरेको ओभरटाइमलाई ध्यान दिएन।
वास्तवमा, [महिना] को महीनामा, म्यामको उद्देश्य प्राप्त गर्न म्याडम [सुपरवाइजरको नाम] को अनुरोधमा [घण्टा संख्या] ओभरटाइम काम गर्थें।
म तपाईंलाई सम्झना गराउन चाहन्छु कि श्रम कोडका अनुसार मैले पहिलो आठ घण्टा २ 25% र अरुको लागि for०% को वृद्धि प्राप्त गर्नुपर्नेछ।
यसैले म तपाईंसंग दयालुपूर्वक मलाई मलाई payण तिरेको रकम तिर्न आग्रह गर्दछु।
लेखा विभाग संग तपाइँको हस्तक्षेप को लागी अग्रिम धन्यवाद दिँदै कृपया, स्वीकार गर्नुहोस् महोदय, मेरो उच्च विचार को अभिव्यक्ति।
डाउनलोड गर्नुहोस् "प्रिमियर-मोडेल.डॉक्स"	प्रीमियर- modele.docx - times१ पटक डाउनलोड गरियो - २० Kb
रिड ईमेलमा CCI राम्रोसँग प्रयोग गर्नुहोस्
"Deuxieme-modele.docx" डाउनलोड गर्नुहोस्	Deuxieme-modele.docx - २ times पटक डाउनलोड गरियो - २० Kb
ओभरटाइमका लागि भुक्तानी अनुरोध गर्न नमूना पत्रहरू जनवरी 8th, 2022Tranquillus
अघिल्लोकोविड - १:: प्रतीक्षा अवधि केहि काम स्टपपेजको लागि हटाईन्छ
निम्नफ्रान्स पुनः लन्च | "१ युवा व्यक्ति, १ समाधान" प्लेटफर्मको सुरुवात